Ecommerce mmadụ ọ bụla?
Site na otutu ndi mmadu dabere na netwọkụ mmekọrịta na blọọgụ maka akụkọ na mmelite, elekwasị anya bụ itinye ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike site na mgbasa ozi mmekọrịta. Agbanyeghị, maka ụlọ ọrụ, ntinye aka dị otú ahụ ma ọ bụ atụmatụ ụlọ na-ewu ewu ga-anọgide na-abụ ihe na-abaghị uru ma ọ bụrụ na ha anaghị atụgharị ụtụ na ego a gbakwunyere
Tinye Ọnwa ọnwa, nke izizi na-ekesa mgbasa ozi azụmahịa, na-enye ụlọ ọrụ ohere ka ha na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe site na mgbasa ozi mmekọrịta, kesaa saịtị ndị mmekọ na mgbasa ozi mgbasa ozi, na ịnabata ụdị njikọ a n'otu oge.
Moontoast nwere Onyinye Ngwaahịa 3 (Nkọwa sitere na saịtị ha):
Storelọ ahịa na-ekesa - tolọ ahịa a na-ekesa Moontoast bụ ụlọ ahịa na-echekwa ihu na webụsaịtị ọ bụla ma kesaa n'ofe netwọkụ mmekọrịta yana site na email. Anyị wuru Storelọ Akesa ka ikwe ka ụdị dị iche iche, ndị egwu, ndị mbipụta, na ndị ama ama gbasaa eCommerce ha site na ị nweta onyinye ozugbo na obodo ha. Dum ahụmịhe ịzụ ahịa na ahụmịhe azụmaahịa dị n'ime ụlọ ahịa ahụ, na-eme ka usoro ịzụ ahịa ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Mmetụta Moontoast - Moontoast Impulse bụ ngwa Facebook nke na-eme ka ndị ọkpọ egwu kpọọ, kesaa ma zụta egwu site na peeji nke Facebook. Ngwa a sitere na tolọ Ahịa E kesara nke ọma na Moontoast nke ndị nka dị ka Taylor Swift na Reba ejirila ịbawanye ahịa n'ịntanetị. Site na Moontoast Impulse, anyị emeela otu nnukwu ihe eji enyere ndị nka niile aka. Ọ bụ azịza azụmahịa, mmekọrịta ọha na eze, ike, DIY.
Nchịkọta Moontoast - Moontoast Analytics bụ atụmatụ atụmatụ siri ike - adịghị na usoro azụmaahịa ọhaneze ọ bụla - nke ahụ na-enye gị ọnụ ahịa. Site na nnụnụ lelee usoro na usoro niile ka esi nweta nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa na ngwugwu na-ere kacha mma, data a na-enye nghọta dị mkpa nke ga - enyere gị aka dozie ma bulie ngwaahịa gị - na-eme ka ha bụrụ ndị na-achọsi ike, ndị na-ekekọrịta, na uru. Moontoast Analytics weputara ihe a choputara site na ichoputa udiri ihe onyinye ndi n’etu gi nma.
Storelọ ahịa a na-ekesa Moontoast bụ ngwa ọrụ na-enye ndị ahịa ohere ịmepụta ma kesaa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'ofe netwọkụ mmekọrịta, blọọgụ, netwọk mgbasa ozi na saịtị mmekọ. Ma gịnị na-eme ka ngwaahịa a pụta ìhè site na narị otu narị ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya na ahịa ahịa karịrị akarị? Azịza ya dị na nhọrọ nhọrọ ịzụ ahịa ọhụrụ.
Ewezuga ọkọlọtọ Ọhaneze enwere ike ịgbakwunye na weebụsaịtị ọ bụla, Ulọ Ahịa PopUp ruru eru maka ibe ọdịda na ọkọlọtọ mgbasa ozi, na-asụgharị ihe ga-abụ mgbasa ozi popup ọzọ, na kaadị ịzụ ahịa. Otu Storelọ Ahịa ahịa na-agbanwekwa ngalaba mgbasa ozi na ụgbọ ibu azụmahịa. Nhọrọ ndị dị otú ahụ na-enye ndị ahịa ahụmịhe kachasị mma dịka ndị a anaghị egbochi ọrụ nchọgharị ha ma ọ bụ na-abanye n'ime usoro ịzụ ahịa ha.
Moontoast Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ bụ ngwa zuru oke iji kwado ụlọ ahịa ndị dị otú ahụ. Na ngwa ọrụ a, ndị ahịa na-enweta nghọta bara uru banyere omume ndị ahịa, iji bulie onyinye ma mee ka ọ ghara iguzogide ndị ahịa ezubere iche. N'otu aka ahụ, ngwá ọrụ ahụ na-eme ka nsuso nsuso na azụmahịa, chọpụta usoro na ọnọdụ, na-ekwe ka ika ahụ nọrọ n'oge kwesịrị ekwesị yana ebe kwesịrị ekwesị. Ngwaọrụ na-enyere aka ịlele mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịkwado na ị nweta ego ọnụ ma na-enyere aka iji chọpụta ROF ma ọ bụ Nloghachi site na ya Fans.
Tags: Storelọ ahịa na-ekesaọnwa ọnwaNchịkọta MoontoastMmetụta Moontoastnchịkọta mmadụecommerce mmadụnchịkọta ecommerce mmadụ
Mmekọrịta Hubspot na Hootsuite
Privkpụrụ Nzuzo Weebụ